Ma Awoodno!! Weeraryahanka Uu Ronald Koeman Sida Dhabta Ah U Doonayay Ee Ay Barcelona Qiimihiisa Awoodi Wayday Oo La Ogaaday - Gool24.Net
Ma Awoodno!! Weeraryahanka Uu Ronald Koeman Sida Dhabta Ah U Doonayay Ee Ay Barcelona Qiimihiisa Awoodi Wayday Oo La Ogaaday
Tababaraha cusub ee kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa la sheegayaa in kooxdiisu ay kahor istaagtay weeraryahanka dookha koowaad ee uu Camp Nou ka doonayay gudaha suuqa xagaagan xilli uu wado dib u dhiska Barca kahor xilli ciyaareedka 2020-21.
Sida ay sheegayaan warar cusubi, dhaliyaha uu Blaugrana ka doonayay Koeman ayaa ahaa weeraryahanka Inter Milan ee Romelu Lukaku kaas oo hal sano uun kusoo qaatay Milano walow uu bandhig heer sarre ah soo sameeyay.
Suarez iyo Koeman ayaa hore ugu soo wada shaqeeyay Everton iyadoo uu xilli ciyaareedkaas ciyaaryahanka ree Belgium 27 gool iyo 7 caawimo kusoo diiwaan gashaday Toffees tartamada oo dhan.
Sida uu sheegayo wargeyska Mundo Deportivo boodhka sarre ee Barcelona ayaa ugu horreynba qiimeeyay fikrada uu la yimid Koeman ee ah inuu doonayo inuu Lukaku bedel uga dhigo Luis Suarez kahor inta aysan iska diidin maadaama oo aysan dhaqaale ahaan awoodin.
Barca ayuu si adag u dhibaateeyay caabuqii dunida hakadka galiyay ee Korona iyadoo ay kooban tahay waxa ay ka qabsan karaan suuqa xagaagan.
Weeraryahanka Lyon ee Memphis Depay ayaa sidoo kale ah xiddig uu Koeman doonayo balse heshiiskaas qudhiisa ayaa u bur-buri kara sababta lacag la’aanta Barca haysata.
Madaxweynaha Lyon ayaa dhawaan si cad saxaafada ugu sheegay in dhigiisa Barcelona ee Bartomeu uu u sheegay inaysan hayn lacag ay dalab kaga soo gudbiyaan Depay.
Sidoo kale tababare Koeman qudhiisa ayaa dhawaan caddeeyay inay u baahan yihiin marka hore inay xiddigo iibiyaan si ay u sameeyaan saxeexa 26 sano jirka ree Netherlands.
Barca ayaa ilaa hadda kooxdeeda kusoo dartay khadkii dhexe ee Juventus ee Miralem Pjanic oo ay ku bedesheen Arthur Melo oo dhinaca Juve tagay.